Gosipụta usoro nri 2 - Ebook siri ike na Thermomix na erughị 30 '
Gosipụta usoro nri 2 - isi nri dị mma na erughị nkeji iri atọ
N'ikpeazụ akụkụ nke abụọ nke awara awara cookbook maka Thermomix, nchịkọta usoro nri ọhụrụ emere maka ndị ahụ niile nwere obere oge iji sie nri ma achọghị ịkwụsị ibu nri zuru oke, ahụike na nke kwesịrị ekwesị.
Ntuziaka 40 ọhụrụ iji kwadebe ihe na-erughị nkeji 30 ma ọlị tupu ebipụta ya na blog
Ugbu a karịa oge ọ bụla anyị ga-etinye oge dị ukwuu n'ụlọ, na oge ọrụ ha anaghị ekwe ka anyị nwee oge dị mkpa ịmalite nri. Nke a na chịkọtara Ezi ntụziaka na-agụnye na-atọ ụtọ isi efere, ijuanya n'akụkụ na-atọkwa desserts dị njikere n’ihe na-erughị nkeji iri atọ ma dabara adaba maka ezinụlọ niile. Want chọrọ ihe atụ? Budata usoro maka nke ọhụrụ n’efu ebook.
Quinoa, anwụrụ ọkụ salmọn na efere lentil
Ìhè ude nke asparagus na-acha ọcha
Riz salad na akwụkwọ nri na nri mmiri
Creamy osikapa na cuttlefish
Spaghetti na cheese ihendori, inine na mịrị
Ọkụkọ na akwụkwọ nri, apụl na prunes
Gin-style prawns na cous cous
Nri dị ụtọ dị ka:
Kuki Chocolate Rasberi Kuki
Lemọn ude iko na mmiri mmiri
Ya mere, na ngụkọta nke 40 Ezi ntụziaka!